ibhulukwe Tactical ekuqaleni esidalelwe nenyumfomu amayunithi ezikhethekile futhi ibutho. Kodwa namuhla, basuke kabanzi nayizimfundamakhwela ukudlala Paintball abadobi abazingeli. Ngenxa anda yokuthengisa ziye zaba atholakale kuwo wonke umuntu nesithakazelo, futhi kube kufanele, njengoba ibhulukwe okusebenzayo kanye akukhawuleli ukunyakaza. izicubu Okuwugqinsi ingenye izinzuzo main, ke ayihambisi umswakama kanye ukumelana ezahlukene okushisa ahlukene. Futhi uzinake ngumuntu okwaziyo ukhululekile, elilungile ukusebenzisa okukhulu nezinhlanga. ibhulukwe zabesilisa Tactical abe waistband ububanzi futhi ithembekile, emaphaketheni evulekile. Hhayi njalo lolu hlobo izingubo ubukeka nolaka futhi uba nombala sifihle. Izitolo lezi zimo zezulu zokuzenzela ngesitayela ezisemadolobheni, abanayo okukhulu eceleni emaphaketheni, wanquma okunye okucishe kufane ukuze ibhulukwe kwansuku zonke.
US ibutho ibhulukwe
Nezingubo US abakhiqizi alitholakali nje kuphela amayunithi lempi. Sebenzisa le imishini e ukuphepha, ukuhlonishwa komthetho, bezobunhloli. ibhulukwe ithungwe eyenziwe izinhlobo ezahlukene izinto, kuhlanganise ukotini. Ngakho, kukhona kungenzeka sokukhetha oyifunayo izicubu ukujiya. Ngakho ibhulukwe Tactical ivikeleke kakhulu kusukela sezulu kanye umswakama, ngokusebenzisa ukwelashwa Ukwakheka ekhethekile. izinkampani zaseMelika ozama acabangele izifiso abathengi hhayi kuphela ukukhiqiza izingubo okusebenzayo kanye izinga, kodwa futhi nokuba ukubukeka ekhangayo. Lezi ibhulukwe ube emaphaketheni wekugcina kancane nge umthamo kakhulu.
ibhulukwe German Military
ibhulukwe Tactical abakhiqizi German kuyizinto ezivamile emakethe. Akungabazeki mayelana izinga yabo, ikhumbula yokuthi babedalelwe ukuhlomisa ibutho lamaJalimane. Moleskine - indwangu esetshenziselwa ukuthunga, njengelinye lamazwe izinhlobo onokwethenjelwa kunayo yonke izinto. Indwangu inamakhasi ambalwa, kodwa, naphezu kwalokhu, ibhulukwe zingamelana zonke izimo zezulu bese ahlale ukhululekile. Bona kubuyise imibala ubudala futhi ukuma ngesikhathi bafake enwetshiwe kanye nokugeza njalo okhuluma ukuqina yabo. Ihlangene eseduze ekhukhwini kokuqina akhethekile izinkinobho. Inzuzo enkulu itholakala uphawu ezindaweni kuncike kakhulu ukugqoka. Abanaso ukusheshe ezivuzayo indawo yokudlula esiminyaminyeni sezimoto futhi bavikelekile nemihuzuko. Ukugqoka amabhulukwe Tactical ngangokunokwenzeka obhince ibhande futhi suspenders.
ibhulukwe Tactical nge amadolo pads
Avikelayo ibhulukwe uhlelo siqukethe inayiloni pads ku phansi shin, amadolo pads of laths plastic esikhiphekayo zafakwa izibunu ndawo.
Amadolo pads benzelwe futhi kulawulwa inayiloni isihlilingi elikuvumela ukuba ukhethe indawo eliphezulu noma iyiphi ubude nesisindo. In the state okuphephile, abazi ukukuthinta futhi musa ibakhathaze, ngisho isikhathi eside egqoke, kuka abakwazi ukuqhosha kneepads Tactical esikhiphekayo. izici Bezakhiwe kusikisela ukuba khona njalo i ivolumu emoyeni ezonini interlayer ngoba afundwa ngesikhathi edolweni ezinyakazayo, okwandisa ukupholisa ukushisa ukudluliselwa kule ndawo.
Cashmere elingenamikhono nge collar uboya esiqongweni ukuthandwa in 2013
Amakhanda abantu Izimfihlo zokuthandwa
Nezingubo kwekhulu le-19: abesifazane namadoda - isithombe kanye nencazelo
Imidlalo ephepheni abadala kanye nezingane
Tony Kukoch: basketball futhi ubuntu
MTS-975: Ukubuyekezwa kwe-smartphone
Ukuphathwa Komsebenzi. Indlela yokunqoba isiqongo Olympus Business.
Amalungiselelo Domestic ebusika: ukhukhamba ukudla okusheshayo
Plant izaqathe: sezindawo ewusizo zezitho zasemoyeni
A kancane mayelana nendlela Fry cutlets
UDkt Myasnikov nomfutho wegazi ophezulu: indlela yokuphatha? Izincwadi Aleksandra Myasnikova
Umuthi 'Tamiflu ": ukubuyekezwa kanye Umhlahlandlela